မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကိုဆေးခြောက် Smoking ဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံကြောအမျှင်ကိုပျက်စီးစေခြင်းငှါ - သတင်း Rule
မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကိုဆေးခြောက် Smoking ဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံကြောအမျှင်ကိုပျက်စီးစေခြင်းငှါ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကိုဆေးခြောက် Smoking ဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံကြောအမျှင်ကိုပျက်စီးစေခြင်းငှါ” Ian ကနမူနာသိပ္ပံအယ်ဒီတာကရေးသားခဲ့သည်, The Guardian ကသောကြာနေ့ 27 ရက်နေ့မှာနိုဝင်ဘာလများအတွက် 2015 00.01 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
high-အစွမ်းသတ္တိအားဆေးခြောက်ဦးနှောက်၏နှစ်ခုအရှက်ဖြတ်ပြီးမက်ဆေ့ခ်ျ၏စီးဆင်းမှုကိုကိုင်တွယ်ကြောင်းအာရုံကြောအမျှင်ကိုပျက်စီးစေခြင်းငှါ, သိပ္ပံပညာရှင်များဆို. မှန်မှန်ခိုင်သောက်သည်သူတွေကို၏ဦးနှောက်ကို Scan ဖတ်စက် စကင့်ကဲ့သို့ဆေးခြောက် လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ hemisphere ဆက်သွယ်နှင့်အခြားဖို့ဦးနှောက်၏တစ်ဘက်ခြမ်းမှအချက်ပြမှုများကိုသယ်ဆောင်သောအဖြူအမှု၌သိမ်မွေ့ကွဲပြားခြားနားမှုထင်ရှား.
Related: ဆေးခြောက်: တစ်နာမ၌အဘယျသို့င်?
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံပေါ်ဆေးခြောက်အာနိသင်၏သက်ရောက်မှုမှာကြည့်ရှုရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်စဉ်းစားသည်, နှင့်စကင့်၏ကြီးမြတ်အသုံးပြုခြင်း corpus callosum ဖို့ပိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းအကြံပြုထားသည်, ဦးနှောက်ရဲ့ hemisphere အနှံ့ဆက်သွယ်ရေးလျော့နည်းအကျိုးရှိစွာအောင်.
Paola Dazzan, ဘုရင့်ကောလိပ်လန်ဒန်မှာစိတ်ရောဂါကုသမှု၏ Institute မှတစ်ဦး neurobiologist, သက်ရောက်မှုတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အဆင့်အတန်းနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပေါ်ထွန်းသောကပြောပါတယ်, tetrahydrocannabinol (THC), ဆေးခြောက်ထဲမှာ. ဆေးခြောက်၏အစဉ်အလာပုံစံများဆံ့နေစဉ်2သို့4% THC, ပို. အစွမ်းထက်မျိုးပေါင်း (သောအကြောင်းရှိပါတယ် 100), မဆံ့နိုင် 10 သို့ 14% THC, အ DrugScope မေတ္တာအဆိုအရ.
"သင် corpus callosum မှာကြည့်ရင်, ဘာကိုမွငျလြှငျင့်မြင့်မားတဲ့အာနိသင်ဆေးခြောက်ကိုသုံးသောသူတို့အားနှင့်မူးယစ်ဆေးကိုသုံးဘယ်တော့မှသောသူတို့အားအကြားအဖြူအမှု၌သိသိသာသာကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်အနိမ့်အာနိသင်မူးယစ်ဆေးကိုသုံး,"Dazzan ကပြောပါတယ်. အဆိုပါ corpus callosum cannabinoid receptors ကြွယ်ဝသည်, အရာပေါ်တွင် THC ဓာတုပြုမူသောအမှု.
အ corpus callosum တစ် DTI ပုံရိပ်, ဘေးထွက်မှမြင်အဖြစ်, အပေါ်အနီမှာပြသခြင်းနှင့်ဦးနှောက်၏တစ်ဦးနောက်ခံ MRI ပုံရိပ်အပေါ် superimposed သည်. ဓါတ်ပုံ: စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ Institute မှ
"ဒီခြားနားချက်သင်သည်စိတ္တရှိသည်သို့မဟုတ်မရှိမရှိလည်းမရှိ, ကျွန်တော်ဒီအဆေးခြောက်များ၏အာနိသင်မှတင်းကြပ်စွာဆက်စပ်သည်ထင်,"ဟုသူမကဆက်ပြောသည်. လေ့လာမှု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဂျာနယ်တွင်အစီရင်ခံကြသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ.
သုတေသီနှစ်ဦးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့နည်းပညာများကိုအသုံးပြု, သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) နှင့်ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ် (DTI), အ corpus callosum ဆနျးစစျဖို့, အဖြူကိစ္စ၏အကြီးဆုံးဒေသ, ၏ဦးနှောက်အတွက် 56 စိတ္တ၏တစ်ဦးပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့သောလူနာ, နှင့် 43 ဒေသခံရပ်ရွာလူထုမှကျန်းမာတဲ့စေတနာ့.
အကြောင်းအားဖြင့် - အဆိုပါ Scan ဖတ် High-အာနိသင်ဆေးခြောက်၏နေ့စဉ်အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးအနည်းငယ် သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိ 2% - အ corpus callosum မှာ "ပျံ့ဆိုလို". "ဒါကနောက်ဆုံးမှာကြောင့်လျော့နည်းအကျိုးရှိစွာစေသည်အဖြူရောင်အမှု၌ပြဿနာတစ်ခုထင်ဟပ်,"Dazzan ဂါးဒီးယန်းကပြောပါတယ်. "ကျနော်တို့ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဘို့ကိုဆိုလိုအတိအကျဘာမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်အချက်အလက်များ၏လျော့နည်းအကျိုးရှိစွာလွှဲပြောင်းရှိပါတယ်အကြံပြုထားသည်။ "
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုအဖြူကိစ္စမှဆေးခြောက်အကြောင်းမရှိအပြောင်းအလဲများအတွက် THC ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းကိုအတည်ပြုမပေးနိုငျ. Dazzan မှတ်စုအဖြစ်, ပျက်စီးသွားသောအဖြူကိစ္စနှင့်အတူလူကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌စကင့်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်က.
"ဒါဟာဤလူပြီးသားတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဦးနှောက်ရှိသည်နှင့်သူတို့ဆေးခြောက်သုံးစွဲဖို့ကပိုများပါတယ်ဖြစ်နိုင်သည်. ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့အာနိသင်င်လြှငျမူကားအဘယျသို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်သည်, နှင့်သင်မကြာခဏဆေးလိပ်သောက်လျှင်, သင့်ဦးနှောက်ကိုပုံမှန်ဆေးခြောက်သောက်သူတစ်ဦး၏ဦးနှောက်မှကွဲပြားခြားနားသည်, မှာအားလုံးဆေးခြောက်ဆေးလိပ်သောက်ဘူးသူတစ်ဦးထံမှ,"ဟုသူမကဆိုသည်.
Related: ဒါကြောင့်စကင့်ဆေးလိပ်စိတ္တဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဒါပေမဲ့ပျော့ဆေးခြောက်မ?
ဒါပေမယ့်ပင်အကြောင်းမရှိနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်မသေချာမရေရာနှင့်အတူ, သူမသည်အသုံးပြုသူများအားတိုက်တွန်းခဲ့သည်နှင့်လူထုကျန်းမာရေးလုပ်သားသူတို့ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုကိုစဉ်းစားပုံကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်. "ဒါကြောင့်အရက်မှကြွလာသည့်အခါ, ကျွန်တော်တို့ကလူကိုသောက်လော့ဘယ်လောက်စဉ်းစားရန်အသုံးပြုကြသည်, ထိုသူတို့စပျစ်ရည်ကိုမသောက်ကြသည်ဖြစ်စေ, ဘီယာ, သို့မဟုတ်ဝီစကီ. ကျနော်တို့ကအလားတူလမ်းအတွက်ဆေးခြောက်စဉ်းစားသင့်တယ်, THC နှင့်ဆေးခြောက်များရှိနိုင်ပါသည်မတူညီသောအကြောင်းအရာများကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌, နှင့်အလားအလာကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုကွဲပြားခြားနားသောဖွစျလိမျ့မညျ,"ဟုသူမကဆိုသည်.
"ကျနော်တို့ယခင်ကအကြံပြုခဲ့ကြသည့်အတိုင်း, ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုအကဲဖြတ်ကြသောအခါ, အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုမကြာခဏနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အမျိုးအစားဆေးခြောက်၏သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ဤရွေ့ကားအသေးစိတျစိတျပိုငျးဆိုငျရာကနျြးမာရေးပြဿနာများ၏အန္တရာယ်များကိုတွက်ချက်ကူညီနှင့်ဤတ္ထုများဦးနှောက်မှလုပျနိုငျပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအမျိုးအစား၏အသိအမြင်တိုးမြှင့်နိုင်,"ဟုသူမကဆက်ပြောသည်.
ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက်, Dazzan and others at the Institute of Psychiatry အစီရင်ခံ that the ready availability of skunk in south London might be behindarise in the proportion of new cases of psychosis being attributed to cannabis.
32068	0 အပိုဒ်, ဆေးခြောက်, မူးယစ်ဆေးဝါး, ကျန်းမာခြင်း, မှ Ian နမူနာ, အဓိကအပိုင်း, စိတ်ကျန်းမာရေး, neuroscience, သတင်း, Psychiatry, သိပ္ပံ, အုပ်ထိန်းသူ, ဗြိတိန်သတင်း
← 30 နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူသားသမီးတို့အဘို့ခရစ္စမတ်ဆုလက်ဆောင်စိတ်ကူးများ သင့်ရဲ့ခရစ္စမတ်စျေးဝယ်လုပ်နေကြများအတွက်အကောင်းဆုံး app များ၏ဆယ်ပါး →